Mmetụta Ọdịda nke Afghanistan na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Mmetụta Ọdịda nke Afghanistan na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya ụwa
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • LGBTQ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Iwughachi • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
World Tourism Network na -enwe nchegbu maka ọnọdụ dị ugbu a na Afghanistan. Onye isi oche WTN Dr. Peter Tarlow bụ onye ndu ọgbakọ njem njem mbụ zuru ụwa ọnụ na -enye nyocha ya banyere ọdịda Kabul na ihe iweghara ndị Taliban na Afghanistan ga -eme njem nlegharị anya ụwa.
Network Njem Nleta Ụwa Onye isi ala Dr. Peter Tarlow bụ ọkachamara n'ụwa niile na njem njem na njem nlegharị anya ma na -atụkwa anya na Kabul dabara n'aka ndị Taliban dị ka nnukwu ihe na -echegbu onwe ya maka njem njem na njem njem ụwa na ndị otu Network Tourism Network na mba 128.
Enweghi obi abụọ ọ bụla na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme ga-arụrịta ụka banyere nzuzu nke ma amụma US na nke European na-ele anya na Afghanistan ruo ọtụtụ iri afọ na-abịanụ. Ọtụtụ mba anwaala imeri Afghanistan, site na Ancient Chinese ruo British, site na ndị Russia ruo ndị America.
N'ọnọdụ niile, Afghanistan emeela ka aha ya dị ka "ili nke alaeze ukwu". Ọdịda Kabul n'oge na-adịbeghị anya bụ naanị ọdịda ọdịda ọdịda anyanwụ yana site na echiche geo-ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmetụta mmeri a ga-enwe mmetụta ruo ọtụtụ afọ ma ọ bụ iri afọ na-abịa.
Ọ kwesịghị iju onye ọ bụla anya na mmetụta nke ihe ndị mere n'ime ụbọchị ole na ole gara aga, malite na Ọgọst 14 nwekwara ike imetụta ụwa nke ndị njem n'ụzọ ndị ọrụ ụlọ ọrụ njem na -aghọtabeghị ma ọ bụ tinye.
The onye bụbu onye isi ala Afghanistan took ego ole o nwere ike tupu ọ gbapụ obodo ya, na awa ole tupu ndị Taliban enwee ike ịkwụsị ya. Ya na ezinụlọ ya nọ ugbu a na nchekwa na Abu Dhabi ma nabata ha na United Arab Emirates, isi njem na njem nlegharị anya na ebumnuche mmadụ. Nke a ugbu a na -emebi usoro adịghị ike nke nchekwa nke mba ọdịda anyanwụ rụrụ na Afghanistan.
Agbanyeghị n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na enwere ọtụtụ ihe anyị ga -achọ ịmụta gbasara mbibi Afghanistan ọhụrụ, ọ dị mkpa na ndị ọkachamara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọrụ iwu ọha, na ndị sayensị njem nlegharị anya na -azụlite nghọta maka otu mba pere mpe na "ogbenye" ​​siri kpọọ, na nwere ike na -aga n'ihu na -egwu egwu, nnukwu ọrụ dị otú a na ọkwa ụwa yana kwa na njem nlegharị anya ụwa.
Iji ghọta ihe mbibi Kabul pụtara, ọ dị anyị mkpa inyocha obodo ahụ site na mpaghara ala na akụkọ ihe mere eme.
Ndị na -ahụ maka ụlọ na -ekwukarị na ọ bụ naanị okwu atọ na -ekpebi ọnụ ahịa otu ihe. Okwu ndị a bụ “ọnọdụ, ọnọdụ, na ọnọdụ” N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ na ụwa nke ezigbo ụlọ bụ ihe niile.
Ruo oke, anyị nwere ike ikwu otu ihe ahụ gbasara mba dị iche iche.
A na -ekpebi ọtụtụ ọdịnihu mba site na ebe ọ dị n'ụwa. Dịka ọmụmaatụ, mba ndị America, ọkachasị United States, enwela nnukwu uru na oke osimiri kewapụrụ ha na Europe.
Enweghị United States enweghị oke mmegide pụtara na US enweela okomoko nke ihe anyị nwere ike ịkpọ "ịpụ iche mara mma".
Naturalkè ala ya, dị iche na ọtụtụ mba Europe nke nwere ọtụtụ oke na ịdị nso, rụrụ ọrụ ọ bụghị naanị ichebe ọtụtụ mba America site na mwakpo ndị agha mana ruo mgbe Covid malitere na ọrịa ọrịa.
Ọ bụ ezie na ngwụcha narị afọ nke iri abụọ na narị afọ nke iri abụọ na otu ahụla mbelata na uru ala a n'ihi njem nlegharị anya na enweghị ọchịchọ gọọmentị US ugbu a iji chebe ókèala ndịda US, ụkpụrụ ahụ ka bụ eziokwu. Canada enweela ohere inwe ogologo udo udo na US nke nyere Canada ohere itinye obere ego na nchekwa ndị agha.
Afghanistan bụ ọnọdụ dị iche kpamkpam. Mba a nke enweghị oke mmiri dị n'obi ihe ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme kpọrọ '' '' okporo ụzọ silk ''.
Ruo oke, ndị a bụ ala ndị dị n'obi ụwa, ọ bụkwa n'ala ndị a ka ọtụtụ akụkọ ntolite akụ na ụba ụwa mere. Ọ bụghị naanị na Afghanistan na -anọdụ n'etiti okporo ụzọ silk, mana mba ahụ dịkwa oke egwu nke ukwuu na akụ ịnweta.
Dabere na Peter Frankopan na -ehota akụkọ nyocha US Geological na -akọ na Afghanistan bara ọgaranya na cooper, iron, mercury, na potash.
Mba ahụ nwekwara nnukwu nchekwa na ihe a maara dị ka "ụwa na -adịghị ahụkebe".
“Ụwa” ndị a gụnyere lithium, beryllium, niobium, na ọla kọpa. Site na ọdịda Kabul, mineral ndị a na -adịghị ahụkebe na ihe ndị bara uru dị ugbu a n'aka ndị Taliban na mineral ndị a nwere ike ime ka ndị Taliban baa ọgaranya nke ukwuu.
O kwesịghị iju anyị anya ma ọ bụrụ na ndị Taliban anaghị eji ndakpọ akụ na ụba a dị ka ụzọ isi mee ka ebumnobi ha kwupụtara maka imepụta Califate Alakụba zuru ụwa ọnụ.
Ole na ole ndị ọdịda anyanwụ na ọbụna ndị ọrụ nlegharị anya ole na ole ghọtara uru ala na mineral ndị a na -adịghị ahụkebe na eziokwu na China nwekwara ọtụtụ ihe ndị a. Anyị na -eji ihe ndị a n'ihe niile site na mmepụta kọmputa ruo ntụ ntụ.
Njikwa a maka ihe ndị dị ụkọ na nke dị mkpa na ala ndị na-adịghị ahụkebe pụtara na njikọta Taliban-China na-aghọ ihe ịma aka ọhụrụ maka mba ọdịda anyanwụ yana ịgbatị ọrụ njem ha.
Ọdịda Kabul nwekwara ọnụahịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Anurag yadav ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 20, 2021 na 14:47
Enwere nkọwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na -amaghị nke ọma n'isiokwu a karịa ọkụ ọ bụla n'ihe aha na -ekwe nkwa.
Paul Rogers ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 19, 2021 na 14:13
Ibe na -akpali echiche & kwuru nke ọma, Peter. Na PM na -ahapụ ego ahụ niile, n'otu aka ekwenyere m na ọ bụ ihe ihere kpamkpam mana na nke ọzọ ikekwe ọ nwere ya (na onye ọ bụla maara na o nwere ya & na -aza ya ajụjụ) karịa ndị Taliban nwere ya, n'ezie?
Ashraf El Gedawy ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 19, 2021 na 07:55
Ekele niile dịịrị ọkachamara maara njem nlegharị anya nke ukwuu na akụkọ nyocha a dị ịtụnanya iji metụta ọdịda Afghanistan n'aka ndị Taliban, nke na -ebuli okwu nke Islam na ngagharị njem na njem mba ofesi.
Deepesh Gupta ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 19, 2021 na 00:18
Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịnweghị ike idobe ụlọ gị n'usoro ma mebie emebi mgbe ahụ Chineke agaghịkwa enyere gị aka… ..
Enweghị ebumnuche, enweghị ndị agha, ọ nweghị onye ndu ọ bụla. Ị ga -alụ ọgụ nke gị kama ịkatọ ndị ọzọ. Ogologo oge ole ka ị ga -ekwe ka mba ọzọ ọ bụla nọrọ na obodo gị.